ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးနားလည်မှုစာချွန်လွှာ အိန္ဒိယ နှင့် မြန်မာ လက်မှတ်ရေးထိုး - Yangon Nation News
အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးရရှိရေး အတွက် အိန္ဒိယအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း
(၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
၁။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း ဦးဆောင်သည့် နည်းပညာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယ ဆေးသုတေသနကောင်စီ (ICMR) ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dr. Samiran Panda နှင့် ကျန်းမာရေး နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးသုတေသနဌာန၊ Joint Secretary Mrs. Anu Nagar တို့ အားလည်းကောင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဇီဝနည်းပညာဌာန၊ Joint Secretary Dr. Renu Swarup၊ အိန္ဒိယ ပြည်ပရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ Additional Secretary (International Organization) H.E. Shri Vinay Kumar ၊ Joint Secretary (Bangladesh-Myanmar Division) H.E. Smt. Smita Pant၊ National Institution for Transforming India (NITI Ayog) အဖွဲ့ဝင် Professor, Dr. V.K. Paul နှင့် အိန္ဒိယ ဆေးဝါးထိန်းချုပ်မှုဗဟို (DCGI) Drugs Controller General Dr. V. G. Somani တို့ထံ သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂။ အိန္ဒိယအစိုးရ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင်ပင် အိန္ဒိယအစိုးရထံမှ G-to-G အစီအစဉ်ဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ရရှိနိုင်မှုနှင့် အိန္ဒိယ ဆေးကုမ္ပဏီ Serum Institute မှ ဆေးဝယ်ယူနိုင်မှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၃။ ၂၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် သံအမတ်ကြီး၏ နေအိမ်၊ မြန်မာဂေဟာရှိ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် Serum Institute တို့အကြား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား Virtual ဖြင့် လဲလှယ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် မြန်မာသံရုံးမှ သံမှူးကြီး ဦးအောင်အောင်မျိုးသိမ်းမှ သက်သေအဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Source – Ministry of Foreign Affairs Myanmar